Itoobiya oo farta ku fiiqday warbaahinta buubuuninta u sameeya argagixisada Tigreega - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Itoobiya oo farta ku fiiqday warbaahinta buubuuninta u sameeya argagixisada Tigreega
Itoobiya ayaa si kulul uga jawaabtey qoraal ka sooo baxay hay’ad Ingiriiska ku taal oo sheegata inay u doodo xuquuqda dadka kadib markii sida caadiga ahayd la safatey Tigreega. Hay’adan ayaa haba yaraatee taaban xasuuq Tigreegu ka gaystey gobolada Canfarta iyo Axmaarada.
”Waxa noo cad in warka madaxdiisa ee ka soo baxaya saxaafada reer galbeedka ha u badnaadaan Faransiiska, Maraykanka iyo Ingiriiska uu yahay mid xaqiiqda ka fog ayagoo ka dhigaya Tigreega gobol aan ka mid ahayn Itoobiya.
Itoobiya ayaan welli go’aan ku gaarin inay sooo afjarto falaagada Tigreega oo welli ku haya gobolada la jaarka ah. Ciidanka ayaa ka soo baxay Tigree si dadka fursad lo siiyo wax beerashada, waxay kaloo ahayd mid lagu dejinayo cadaadis xoogan oo uga yimi Maraykanka.
Waxaan shaki ku jirin in dhawaqa Tigreegu toos u gaarayo gaalada kale halka Cabi Axmed loo arko qoomiyad la haysan jirey oo aan xaq u lahayn inay xukunto Itoobiya.